Ella, ny tsara indrindra any Sri Lanka (fizarana I) | Vaovao momba ny dia
Enric Gili | | Colombo, General, mpitarika, Sri Lanka
Androany aho hiresaka aminao Ella sy ny manodidina azy, tanàna iray misy ao amin'ny Highlands, afovoan-tany any Sri Lanka. Làlana kely hahitana teboka jeografika roa tena mahaliana avy amin'i Ella amin'ny andro iray ihany.
Ny tanàna mihitsy dia tsy miavaka amin'ny hatsaran-tarehiny fa io no teboka tsara indrindra ho an'ireo fitsangatsanganana tsara indrindra azo tanterahina ao amin'ny firenena Sri Lankan.
Any amin'ny distrikan'i Badulla (faritanin'i Uva) no misy azy ary 1050 metatra ambonin'ny haavon'ny ranomasina no misy azy. Mifandray amin'i Colombo sy Kandy (tanàn-dehibe amin'ny firenena) amin'ny lamasinina sy ny arabe, manodidina ny 200Km avy any an-drenivohitra izy (Colombo). Manana mponina manodidina ny 45.000 ny tanàna, na dia tsy mipetraka ao amin'ny vovo-tanàn-dehibe aza ny ankamaroany, fa any an-tendrombohitra sy lemaka manodidina azy.
Raha jerena ny haavon'ny faritra sy ny toetr'andro tropikaly, ny faritanin'i Uva sy ny manodidina an'i Ella dia a toerana tonga lafatra ho an'ny fambolena dite.
Ny làlan'ny backpacking rehetra avy any Sri Lanka dia tsy maintsy mamakivaky an'i Ella, ary avy eo mandamina ny fitsangatsanganana samihafa.
1 Ahoana no ahatongavana any Ella?
2 Little Adam's Peak (na Sri Pada kely)
3 Ravana Falls (Ranon'i Rawana)
Ahoana no ahatongavana any Ella?
Mety ho tratry ny làlana na lamasinina izy io.
Maro ny lalana mampifandray ny tanàna amin'ny sisa tavela amin'i Sri Lanka. Azo antoka fa ny làlambe sy ny fifandraisana dia avy any atsimo amin'ny A2 sy A23 (miampita an'i Telulla sy Wellawaya) ary avaratra mankany Badulla Nuwara Eliya sy Kandy. ny
Tao anatin'izay taona lasa izay dia nanjary toerana fizahan-tany manan-danja i Ella ary nitombo be ny famokarana toekarena, ka maro ny zotram-pitateram-bahoaka izay mampifandray ny tanàna amin'i Dambulla, Haputale, Kandy ary na i Colombo, renivohitry ny firenena aza.
Safidy iray hafa hahatongavana any Ella dia ny lamasinina. Iray amin'ireo tsipika mamakivaky ny firenena ihany no mahatratra ny tanàna, manokana ilay mampifandray an'i Colombo amin'i Nanu Oya (Nuwara Eliya), Haputale, Ella ary farany Dambulla.
Izaho manokana dia mamporisika ny hanao ampahany amin'ny fitsangatsanganana amin'ny lamasinina, noheverina ho iray amin'ireo tsara tarehy indrindra eran'izao tontolo izao rehefa miampita ny havoana an-tendrombohitra avo amin'ny toetr'andro tropikaly sy ny fambolena dite mitohy. Mba hahatongavana any aminy dia ataoko amin'ny alàlan'ny fiara na bus iraisana, raha vantany vao te hifindra any amin'ny tanàna na tanàna hafa ianao dia eny, amin'ny lamasinina.
Ny fiaran-dalamby mihitsy dia miadana be Ka raha mikasa ny hiala any Colombo mankany Ella ianao na avy any Kandy mankany Ella dia tadidio fa raha hanao 20Km eo ho eo dia mila adiny iray farafahakeliny ny lamasinina. Misy vidiny samihafa (mora vidy daholo) arakaraka ny kilasy, izaho manokana dia niditra kilasy voalohany (tsy nahy) ary faharoa ary tsy dia nahatsikaritra fahasamihafana aho, ny zavatra mahaliana dia ny misaintsaina ny tontolo manodidina ny fiaran-dalamby.
Little Adam's Peak (na Sri Pada kely)
Iray amin'ireo fitsangantsanganana kintana ao amin'ny faritra ary mety amin'ny rehetra: ny fiakarana mankany amin'ny Little Adam's Peak; ny Ny fiakarana amin'ny tendrony dia mora sy haingana. Izy io dia manana ny endriny (amin'ny kinova kely) manana ny tendrombohitra masin'i Sri Lanka ianao, antsoina hoe Tendrombohitra Adam (any amin'ny faritra hafa ary tsy notsidihiko manokana).
Mba hahatongavana any an-tampony dia hanaraka hatrany ireo famantarana eny an-dalana hatrany isika, amin'ny fotoana rehetra dia misy ny famantarana hahatongavana any amin'ny tendron'i Little Adam. sokajy sahabo ho 1 ora miakatra avy eo afovoan-tanàna.
Ny tapany voalohany dia mihazo ny lalana Ella (B113). Rehefa afaka minitra vitsy, ary rehefa tonga ao amin'ny Ella Flower Garden Resort isika, dia ho hitantsika eo ankavanana ny famantarana izay hilaza amintsika fa tokony handray an'io lalana io isika ary hanomboka hihanika (mankany amin'ny Little Sri Pada na Little Adam's Peak).
La ny tapany faharoa amin'ny fitsangatsanganana dia eo anelanelan'ny tanimboly sy ny tanimboly, faritra mahatalanjona. Ho hitantsika ny tanimboly havia sy havanana efa ho ny antsasaky ny sisa tavela mandra-pahatongantsika any an-tampony.
Farany ny tapany fahatelo sy farany, ilay misy hantsana masiaka kokoa nefa mora. Afaka minitra vitsy dia hahatratra ny tampon'ny tendron'i Little Adam's Peak isika. Hatramin'io fotoana io dia hitantsika ny lohasaha manontolo mankany amin'ny lemaka atsimo sy ny ranomasina, Ella sy ny manodidina azy ary ny toeram-pambolena dite any amin'ny faritra. Mahafinaritra ny fomba fijery.
Ravana Falls (Ranon'i Rawana)
Fitsangatsanganana iray hafa tena ilaina avy amin'i Ella, ny ravana latsaka.
Ireo dia hita eo akaikin'ny làlambe. Ny fomba tsara indrindra hahatongavana amin'izy ireo dia ny fitateram-bahoaka avy any an-tanàna ary afaka minitra vitsy dia ho tonga eo amin'ny fijanonana eo akaikin'ny riandrano izahay.. Safidy iray hafa ny mandeha an-tongotra avy any Ella eny an-dalana. Amin'ity tranga ity dia manoro hevitra ny fiara fitateram-bahoaka aho, ny fandehanana amin'ny lalana tery any Sri Lanka dia tsy safidy mety.
Raha vantany vao ho hitantsika ny Ravana Falls eo alohanay, hiditra amin'ireo riandrano avy amin'ny arabe, raiso fotsiny ilay lalana kely misy ary afaka roa minitra dia eo anoloana isika.
Ny iray amin'ireo manintona an'i Rahavana dia ny ahafahanao mandro tsy misy olana any amin'ny faritra ambany, ny fianjeran'ny rano avy any amin'ny 25 metatra ny haavony dia somary manaitra ihany fa tsy misy olana, azo antoka.
Mety Afaka mandeha amin'ny fitsangatsanganana an-tampon'ny Little Adam's Peak sy Ravana Falls ianao amin'izany andro izany, ny iray maraina ary ny iray kosa amin'ny tolakandro. Nataoko toy izao ary manome fotoana hahitako ny zava-drehetra tsy maimaika ary handro am-pitoniana any amin'ny riandrano aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Colombo » Ella, ny tsara indrindra any Sri Lanka (ampahany I)
Ny firenena be mpitsidika indrindra any Azia